Shororkeessaan Eenyu? -
bilisummaa February 20, 2018	Leave a comment
Shororkeessaan eenyu? isa akkamiititu shororkeessadha? Isa
walqixxummaaf falmu, isa mirga saba isaaf qabsaawu, isa
dimookiraasii dhugaaf dubbatu moo isa biyya namaa weeraree mirga
uummamaa fi dimookirsii namaa sarbee saamicha gaggeessu dha? isa
dhugaaf dhaabbate moo abbaa irree waraana amma funyaanitti hidhate
bobbaasee maaf mirga keessan gaafattan jedhee nama fixuudha? Eenyu
shororkeessan? Isa ajjeechaan haa dhaabbatu jedhee dhugaaf falmu moo
? Isa barataa, barsiisaa, daa’amaa guddaa, jaarsaa jaartii
karaarratti rashanuudha? Eenyu shororkeessaan isa mirga abbaa
biyyummaa isaaf falmu moo? Isa sisaamu malee jedhee ajjeechaa
raawwatuudha? Kami shororkeessaan?
Gaafiin kun gaafii wal xaxaa fi wal nama mormisiisuu miti, nama gorora
liqimsee mitii daa’imti sabiyyiin kan deebiftuudha. Eeyyee gaafii ifaa
fi eenyuuyyuu salphaatti deebisuu danda’uudha. Shororkeessaan isa
uummata biyya isaa irratti bahaa gala dhorku, murna ykn mootummaa
fedhii uummataa malee humnaan aangoo qabatee isin bulchu malee
jedhuudha, Shororkeessaan isa uummata mirga isaaf falmu ajjeesudha.
Gooleessaan isa qabeenya uummataa afaan qawween irra dhaabbatee saamuu
fi saamsisuudha. Shorkeessaan isa xiqqaa guddaa, dhiiraa dubartii
waraana itti bobbaasee karaarratti ajjeesisuudha, Shorkeessaan isa
mirga namaa uukkaamsee nama fixuu fi hidhee dararuudha. Shorkeessaan
isa mirga uumaaa fi dimookiraasii namaa uukkaamsuudha. Hiikni
shorkeessaa inni beeknuu fi addunyaan irratti walii galu kana. Murnas
ta’e mootummaa yakkoota akkanaa saboota irratti rawwatu
shororkeessadha. Kanaaf uummanni Oromoos Wayyaaneedhaan
shororkeessituudha jedha, kanaaf irrattis qabsaawaa ture, qabsaawaas
jira. Wayyaaneen murna uummata Oromoo irratti yakka shororkaa
Wayyaaneen shorkeessituudha. Wayyaaneen murna humnaan aangoo qabattee,
aango kanarra turuuf ammoo shororkaa raawwachaa jirtuudha. Saboota
biyyattii addatti ammoo uummata Oromoo mirga isaaf falamatu irratti
yakka raawwachaa turte. Jumlaan ajjeesaa, hidhaa fi dararaa turte,
ittis jirti. Wayyaaneen saamaa jiraachuuf jecha yakki uummata Oromoo
irratti hin raawwatin hin jiru.
Uummanni Oromoo guyyaa Wayyaaneen aangoo shiraa fi afaan qawweetiin
qabatteerraa kaasee akkuma dura dhaabbateetti jira, murna saamichaaf
aangoo humanaa fi shiraan qabattee ta’uu waan dursee hubateef
kaleessaa amma har’aatti kunoo falmii walirraa hin cinne irratti
gaggeessaa jira. FXG dabalatee ilmaan isaa qabsaawoonni/qeerroon
qabsoo xumura gabrummaa irratti gaggeessaa jiru. wareegama kaffalmaa
tureeniis kunoo uummanni Oromoo injifannoolee cucculuqoo gonfateera.
Murni mootummaa ofiin jettu Wayyaaneen FXG fi qabsoo hidhannoo
uummanni Oromoo dhaaba isaa ABO fi ilmaan isaa qeerroo waliin irratti
gaggeessu kana dhaamsuuf yaaliin hin taasisiin hin jiru. Ilmaan
Oromoo sabboontoota saba isaaniif quuqaman kumootaan hidhaa, kanneen
mirga abbaa biyyummaa Oromoof qabsaawan, ajjeesaa fi dararaa turtee
jirti. Kanneen eessa buteen isaanii dhabames danuudha. Walumaa
galatti haa milkaawuu baatuuf malee wayyaaneen humnaan qabsoo uummanni
Oromoo mirga abbaa biyyummaa isaaf taasisu ukkaamsuuf yaaltee jirti.
Haa ta’uutii Uummanni Oromoo addatti ammoo sabboontonni qabsaawoonni
qaroon sabaa; mirga Oromoon uumamaan qabuuf falmaa turan , ammas
falmaa isaanii caalatti cimsanii falmaa jiru malee akka Wayyaaneen
kajeelte qabsoo isaanii hin dhaabne. Maqa balleessiin
shororkeessitoota jechuun gaggeessaa turtee fi hidhaa ajjeechaanis
duubatti isaan hin deebifne. Saba Oromoo aamamaa jiru, saba Oromoo
mirgi isaa cabee dhiitamaa jiruuf caalaatti falmaa jiru.
Wayyaaneen dargaggoota qeerroo, qabsaaoota Oromoo mirga saba isaaniif
qabsaawaa turanii fi jiraniin shororkeessitoota jechaa turteetti,
hedduus kanaan yakkitee ajjeeftee jirti, mana murtii ishii kan
fakkeessiittis dhiheessitee du’aa amma humrii guutuu itti murteessaa
turtee jirti. Kanneen eessa buuteen isaanii dhabame, kanneen biyyaa
baqachifamanis akkasuma lakkoofsa hin qaban. Har’a garuu uummanni
Oromoo of ittisuurraa gama haleellatti cehee jira. Qabsoo mirga abbaa
biyyummaa gaggeessaa jiruun Wayyaanee shororkeessaa jira. Kunoo osoo
hin jaalatin dirqamtee holola sodaarra madde hololaa jirti.
Dhiphattees akuma argaa fi dhagahaa jirru kanneen hartee hidhaa turte
gadi dhiisaa jirti. FXG uummanni Oromoo waggoota hedduuf gaggeessaa
ture, qabsoon ABO /qeerroon finiinaa ture firiin muldhacha jira.
Eeyyee uummanni Oromoo wayyaaneen holola sobaa fi sossobaa adda adda
gaggeessitus didee fincila itti fufeera. Kunoo lagannaa gabaa, uggura
geejjibaa, hojii dhaabuu gaggeessuun sirnicha caalatti dhiphisaa jira.
Wayyaaneen ofii shororkeessituu taatee uummata Oromootiin addatti
ilmaan isaatin Shororkeessaa jechaa turte har’a saaxilmatee qaana’aa
jirti. Salphachaa jirti, qabsoon Oromoo qullaa isii dhaabaa jira.
Miseensonni dhaaba goleessituu tanaas kanneen OPDO ta’uun tajaajilaa
jiran dabalatee yeroon itti addabaabaayi dhugaatti dhihaatanii kan
harka isaanii argatan fagoo miti. Shakkii malee qabsoon keenya cimee
itti fufnaan dhidhimni Wayyaanee hin oolu.
Akkuma hunduu beekuu fi quba qabuu murni gooleessituun tun fakkeessiif
yeroo ammaa kana hidhamtoota hike, tarkaanfii akkanaa fi akkasii
fudhachaan jira jechaa jirti.Jaalattee osoo hin ta’in dirqamtee ilmaan
sabootaa addatti sabboontoota Oromoo dharaan yakkitee manneen
hidhaatti waggootaaf guuraa turte jaalattee osoo hin taane
dhiphattee hiikaa jirti. Murni gooleessituun tun osoo du’aa jirtuu
maqaaf jira jechuuf namoota dirqamtee hiikaa jirtu kana yoo unka
qopheessitee nuti shororkeessitoota turre, ammaan achi itti hin
deebinu jedhaatii mootumma kiyyaaf mallatteessaa jechaa jirti. Haa
ta’uutiii gama kanaaniis hin milkoofne. hidhamtoonni hunduu
shorkeessaan kan mirga uummattootaa sarbee, sabbooontoota hidhaa fi
ajjeesaa, dararaa fi saamicha gaggeessaa jiru jechuun harkatti
busheessaniiru. Qaanessaniiru. Caalaatti akka dhiphattu taasisaniiru.
jaalttee osoo hin ta’in dirqamtee hidhamtoota muraasa ta’anis hiikuu
itti fuftee jirti. Kun ammoo Oromoof injifannoodha, kun ABOf
injifannoodha, kun qeerroo bilisumaa Oromoof innifannoodha.
Amma mootummaan faashistiin,murni Shororkeessituun waggoota 26n
darbaniif uummata Oromoo goolaa turte dhumafii jira. Guyyaan itti
dhidhimtu dhihaachaa jira. Dhaabni sabboontoota haqaaf qabsaawaniin
shorkeessitoota jechaa turte sobduu ta’uun, shorkeessaan ishii ta’uun
addunyaaf ifa ta’eera. Kun ammoo kufaatii ishii saffisiisaa jira.
Guyyaa kufaatii ishii kana caalaatti saffisiisuu fi dhiheesuuf ammoo
qabsoo itti jirru qabsoo roga maraa, FXG ABO/qeerroon durfamu gama
maraanuu akka cimu waan nurraa eegamu bahachuu qabna. Amma murni
shorkeessituun tun gateettii ummata keenyarraa butuutti qabsoon keenya
caalaatti cimuu qab.
Previous Ergamaa tokkoo buusanii ergamaa biraa kaa’uunis ta’e, Labsii yerooo muddamaa uummata mirga isaaf qabsaawurratti labsuun qabsoo Ummataa duubatti hin deebisu.
Next TPLF tank is ready to protect TPLF bank, but the role of the Ethiopian prime minster resembles gastric bypass